နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်များ
နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များနဲ့ သူတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်များ
18 May 2018 . 5:56 PM
ဆယ်လီတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အလှအပနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် အစားအသောက်ကအစ သတိထားပြီး ကိုယ်ပိုင်စားဖိုမှုးတွေ၊ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ရေးဆရာတွေနဲ့ ချက်ပြုတ်စားသောက်လေ့ကျင့်ပေမယ့် သူတို့တွေဟာလည်း လူသားတွေထဲက လူသားတွေပဲမို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ သွားရည်စာတွေကို ကြိုက်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ မဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုက်လှတဲ့ အပျော်စား စားစရာတွေက ဘာတွေလဲလို့ စပ်စုကြည့်ရအောင်။
Marie Clarie နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အင်တာဗျူးမှာတော့ Emma Watson ရဲ့ အိမ်မှာ စားလေ့စားထရှိတဲ့ အစားအသောက်က Egg Tortillas လို့ ခေါ်တဲ့ ကြက်ဥ Omelette တစ်မျိုးကို ကြိုက်ပါတယ်တဲ့။ ကြက်ဥရယ်၊ Salsa Sauce ရယ်၊ ထောပတ်သီးအနှစ်ရယ် တို့စားရတာကို အကြိုက်ဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။
Kylie Jenner ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ကန်ဇွန်းဥနီယို အချိုပွဲကို ကြိုက်ပါတယ်တဲ့။
ပျိုမေတွေရဲ့ အသည်းစွဲ Justin Bieber လေးရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကတော့ Spaghetti Bolognese ဖြစ်ပါသတဲ့။
Gigi ကတော့ ဘာဂါကိုကြိုက်လွန်းလို့ ပြောစမှတ်တွင်ရသူပါ။ သူ့အကြိုက်ဆုံးဘာဂါကတော့ နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ JG Melon က ဘာဂါလို့ ဆိုပါတယ်။
Gigi လိုပဲ Kendall ကလည်း ဘာဂါကြိုက်သူလေးပါ၊ တစ်ခုပိုသွားတာက Pancakes ရော၊ Pizza ရောပါ ကြိုက်တာပါပဲ။
မင်းသမီး Gwyneth Paltrow ကတော့ ကြက်သားသုတ်၊ မြေပဲဆံချောင်းနဲ့ ရှောက်ရွက်နဲ့ လီမွန်ရောထားတဲ့ ဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Emma Stone ကတော့ အာလူးချောင်းကြော်နဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်သေးလေးတွေ ကြော်ထားတာကို ကြိုက်တာပါ။
Demi Lovato ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အစားအသောက်ကတော့ ကလေးတွေကြိုက်တဲ့ ချောကလက်ကွတ်ကီးဖြစ်ပါတယ်။
Tay Tay တစ်ယောက်ကလည်း Demi Lovato လိုပဲ Cookies ကြိုက်တာပါ၊ ဒါပေမယ့် သူက ဆိုင်ရွေးပြီး နယူးယောက်က Levain Bakery ကဟာကို ကြိုက်ပါသတဲ့။
Levain Bakery က Chocolate Cookie
Beyonce ကတော့ Pizza မှ Pizza တဲ့နော်၊ ကြိုက်လွန်းလို့ တစ်ခါတုန်းကဆို Pizza ပုံနှိပ်ထားတဲ့ အကျီင်္တောင် ဝတ်သတဲ့။
Selena Gomez ရဲ့ Favorite ကတော့ Hot Cheetos မုန့်နဲ့ ချောကလက်ဖြစ်ပါသတဲ့။
Ellen Show ရဲ့ ဖန်တီးရှင် Ellen DeGeneres ကတော့ Arrabiata Sauce နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Pasta Arrabiata ဖြစ်ပါတယ်။
Justin Timberlake ကလည်း Pasta ချစ်သူပါပဲ၊ သူကြိုက်တဲ့ Pasta ကတော့ Lobster Pasta ပါတဲ့။
Justin Timberlake ရဲ့ ချစ်သူဟောင်း ပေါ့ပ်ဘုရင်မ Britney Spears တစ်ယောက်ကတော့ ချောကလက်ကို အသေရရ အရှင်ရရ ကြိုက်တာပါတဲ့။
Ri Ri လို့ ခေါ်တဲ့ Rihanna ကလည်း Pasta ကြိုက်သူပါပဲ။ စားတဲ့ တစ်နပ်တည်းမှာပဲ Pasta ကို မျိုးစုံမှာစားလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
Liam Hemsworth ကတော့ အသီးအရွက်တွေကို ပိုကြိုက်ပြီး သြစတြေးလျသစ်ဥသစ်ဖုတွေကို နှစ်သက်ပါတယ်တဲ့။
Jennifer Lawrence တစ်ယောက်ကတော့ မုန့်ထဲမှာ Cool Ranch Doritos ကို ကြိုက်သူပါ။
Scarlett Johansson တစ်ယောက်ကတော့ Cayenne Pepper နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Buffalo Chicken Wings ကို အသည်းစွဲကြိုက်သူဖြစ်ပါတယ်။
Nick Jonas ရဲ့ အကြိုက်ကတော့ နည်းနည်းစပ်တဲ့ Sriracha Popcorn နဲ့ Cuban Sandwich ဖြစ်ပါတယ်။
Jennifer Aniston က မက္ကဆီကို မြောက်ပိုင်းက အစားအစာဖြစ်တဲ့ Nachos လုပ်စားရတာကို ကြိုက်ပါတယ်။
Hilary Duff ကတော့ Bacon ချစ်သူလေးပါပဲ။
Kim Kardashian ကတော့ လုံးဝကို Fast Food တွေစားရတာ နှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။ McDonald’s တို့ ၊ KFC တို့ ပရိသတ်ပေါ့။
Channing Tatum ကတော့ မြေပဲထောပတ်နဲ့ Jelly Sandwich တွေက သူ့ရဲ့ အချစ်တွေပါလို့ ဝန်ခံထားပါတယ်။
နာမညျကြျောအနုပညာရှငျမြားနဲ့ သူတို့ရဲ့ အကွိုကျဆုံးအစားအသောကျမြား
ဆယျလီတှဟော သူတို့ရဲ့ အလှအပနဲ့ အောငျမွငျမှုတှအေတှကျ အစားအသောကျကအစ သတိထားပွီး ကိုယျပိုငျစားဖိုမှုးတှေ၊ ကိုယျကာယလကေ့ငျြ့ရေးဆရာတှနေဲ့ ခကျြပွုတျစားသောကျလကေ့ငျြ့ပမေယျ့ သူတို့တှဟောလညျး လူသားတှထေဲက လူသားတှပေဲမို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျတဲ့ အစားအသောကျတှေ၊ သှားရညျစာတှကေို ကွိုကျကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ မဖွတျနိုငျအောငျကွိုကျလှတဲ့ အပြျောစား စားစရာတှကေ ဘာတှလေဲလို့ စပျစုကွညျ့ရအောငျ။
Marie Clarie နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှဈ အငျတာဗြူးမှာတော့ Emma Watson ရဲ့ အိမျမှာ စားလစေ့ားထရှိတဲ့ အစားအသောကျက Egg Tortillas လို့ ချေါတဲ့ ကွကျဥ Omelette တဈမြိုးကို ကွိုကျပါတယျတဲ့။ ကွကျဥရယျ၊ Salsa Sauce ရယျ၊ ထောပတျသီးအနှဈရယျ တို့စားရတာကို အကွိုကျဆုံးလို့ ဆိုပါတယျ။
Kylie Jenner ကတော့ ထူးထူးခွားခွား ကနျဇှနျးဥနီယို အခြိုပှဲကို ကွိုကျပါတယျတဲ့။
ပြိုမတှေရေဲ့ အသညျးစှဲ Justin Bieber လေးရဲ့ အကွိုကျဆုံးအစားအစာကတော့ Spaghetti Bolognese ဖွဈပါသတဲ့။
Gigi ကတော့ ဘာဂါကိုကွိုကျလှနျးလို့ ပွောစမှတျတှငျရသူပါ။ သူ့အကွိုကျဆုံးဘာဂါကတော့ နယူးယောကျမွို့မှာရှိတဲ့ JG Melon က ဘာဂါလို့ ဆိုပါတယျ။
Gigi လိုပဲ Kendall ကလညျး ဘာဂါကွိုကျသူလေးပါ၊ တဈခုပိုသှားတာက Pancakes ရော၊ Pizza ရောပါ ကွိုကျတာပါပဲ။
မငျးသမီး Gwyneth Paltrow ကတော့ ကွကျသားသုတျ၊ မွပေဲဆံခြောငျးနဲ့ ရှောကျရှကျနဲ့ လီမှနျရောထားတဲ့ ဖြျောရညျဖွဈပါတယျတဲ့။
Emma Stone ကတော့ အာလူးခြောငျးကွျောနဲ့ ဂျေါဖီထုပျသေးလေးတှေ ကွျောထားတာကို ကွိုကျတာပါ။
Demi Lovato ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အစားအသောကျကတော့ ကလေးတှကွေိုကျတဲ့ ခြောကလကျကှတျကီးဖွဈပါတယျ။
Tay Tay တဈယောကျကလညျး Demi Lovato လိုပဲ Cookies ကွိုကျတာပါ၊ ဒါပမေယျ့ သူက ဆိုငျရှေးပွီး နယူးယောကျက Levain Bakery ကဟာကို ကွိုကျပါသတဲ့။
Beyonce ကတော့ Pizza မှ Pizza တဲ့နျော၊ ကွိုကျလှနျးလို့ တဈခါတုနျးကဆို Pizza ပုံနှိပျထားတဲ့ အကြီင်္တောငျ ဝတျသတဲ့။
Selena Gomez ရဲ့ Favorite ကတော့ Hot Cheetos မုနျ့နဲ့ ခြောကလကျဖွဈပါသတဲ့။
Ellen Show ရဲ့ ဖနျတီးရှငျ Ellen DeGeneres ကတော့ Arrabiata Sauce နဲ့ လုပျထားတဲ့ Pasta Arrabiata ဖွဈပါတယျ။
Justin Timberlake ကလညျး Pasta ခဈြသူပါပဲ၊ သူကွိုကျတဲ့ Pasta ကတော့ Lobster Pasta ပါတဲ့။
Justin Timberlake ရဲ့ ခဈြသူဟောငျး ပေါ့ပျဘုရငျမ Britney Spears တဈယောကျကတော့ ခြောကလကျကို အသရေရ အရှငျရရ ကွိုကျတာပါတဲ့။
Ri Ri လို့ ချေါတဲ့ Rihanna ကလညျး Pasta ကွိုကျသူပါပဲ။ စားတဲ့ တဈနပျတညျးမှာပဲ Pasta ကို မြိုးစုံမှာစားလရှေိ့ပါတယျတဲ့။
Liam Hemsworth ကတော့ အသီးအရှကျတှကေို ပိုကွိုကျပွီး သွစတွေးလသြဈဥသဈဖုတှကေို နှဈသကျပါတယျတဲ့။
Jennifer Lawrence တဈယောကျကတော့ မုနျ့ထဲမှာ Cool Ranch Doritos ကို ကွိုကျသူပါ။
Scarlett Johansson တဈယောကျကတော့ Cayenne Pepper နဲ့ လုပျထားတဲ့ Buffalo Chicken Wings ကို အသညျးစှဲကွိုကျသူဖွဈပါတယျ။
Nick Jonas ရဲ့ အကွိုကျကတော့ နညျးနညျးစပျတဲ့ Sriracha Popcorn နဲ့ Cuban Sandwich ဖွဈပါတယျ။
Jennifer Aniston က မက်ကဆီကို မွောကျပိုငျးက အစားအစာဖွဈတဲ့ Nachos လုပျစားရတာကို ကွိုကျပါတယျ။
Hilary Duff ကတော့ Bacon ခဈြသူလေးပါပဲ။
Kim Kardashian ကတော့ လုံးဝကို Fast Food တှစေားရတာ နှဈသကျသူဖွဈပါတယျ။ McDonald’s တို့ ၊ KFC တို့ ပရိသတျပေါ့။
Channing Tatum ကတော့ မွပေဲထောပတျနဲ့ Jelly Sandwich တှကေ သူ့ရဲ့ အခဈြတှပေါလို့ ဝနျခံထားပါတယျ။
by Ngul Ciin .3months ago